India တွင်အကောင်းဆုံး Duplex ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်သူ
Spento Papers India LLP Morbi ရှိ Mybi, Gujarat ရှိ coated boards နှင့် coated duplex ပျဉ်ပြားများနှင့် White Back Duplex ဘုတ်အဖွဲ့စက္ကူစက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်.0န်ဆောင်မှုခံယူသူများနှင့်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်ချက်နှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုအာရုံစိုက်ရန်ဖြစ်သည်. အပေြာင်း Spento Papers’ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောအရည်အသွေးမြင့်မားသော Duplex ဘုတ်အဖွဲ့စာရွက်စာတမ်းများကိုဆိုးရွားသောအရည်အသွေးမြင့်သော duplex ဘုတ်အဖွဲ့စာရွက်စာတမ်းများကိုထူးခြားစွာထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော.
ငါတို့အကြောင်းပို duplex ဘုတ်အဖွဲ့
Spento Papers Gujarat နှင့်အလွန်ကျွမ်းကျင်ပြီးအပ်နှံထားသောလုပ်သားအင်အားအတွက်အကောင်းဆုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှု coated duplex ဘုတ်အဖွဲ့စက္ကူစက်၏ဂုဏ်ယူစရာပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်. အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့်0န်ဆောင်မှု မှလွဲ. Spento စာတမ်းများသည်၎င်း၏အားသာချက်များသို့မဟုတ်အင်္ဂါရပ်များအရကမ်းလှမ်းထားသည်. သူတို့ထဲကတချို့ဟာ:
နောက်ဆုံးပေါ် coated duplex ဘုတ်အဖွဲ့စက္ကူထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောနှင့် Eco-friendly ထုတ်ကုန်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ duplex ဘုတ်အဖွဲ့စက္ကူထုတ်ကုန်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အဆင့်မြင့်နှင့်တင်သွင်းသော Duplex ဘုတ်အဖွဲ့ကုန်သည်များနှင့်ကျယ်ဝန်းသည့်စက်ပစ္စည်းများနှင့်ကျယ်ဝန်းသည့်စက်များနှင့်ကျယ်ဝန်းသည့်စက်ရုံများနှင့်ကျယ်ဝန်းသည့်စက်များနှင့်ကျယ်ဝန်းသည့်စက်များနှင့်ကျယ်ဝန်းသည့်စက်ရုံများနှင့်ကျယ်ဝန်းသည့်စက်များတပ်ဆင်ထားသည်.
Greyback & Whiteback လိပ်
Liner ဘုတ်အဖွဲ့ greyback
Spento Papers ထောင်နှင့်ချီသောဖောက်သည်များသည်အကောင်းဆုံးစက္ကူကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောအမည်မှာဂုဏ်ယူသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော Duplex ဘုတ်အဖွဲ့ Paperfacturing လုပ်ငန်းစဉ်
Spento Papers ကုန်ထုတ်လုပ်မှုယူနစ်သည် coated duplex ပျဉ်ပြားများနှင့်အဖြူရောင်နောက်ကျော Duplex ဘုတ်အဖွဲ့ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းကိုရည်စူးပြီးဂေဟစနစ်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အရည်အသွေးနဂိုအတိုင်းမနဂိုမ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ couplex board လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်လုပ်သားအင်အားသည်စက္ကူစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလျှော့ချသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ယန္တရားများကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာသည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ Duplex ဘုတ်အဖွဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်သည်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကုန်ကြမ်းများကိုအသုံးပြုသည်။.
ကျွန်ုပ်တို့၏ duplex ဘုတ်စက်များသည်ပတ်0န်းကျင်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ကုန်ချောကုန်ပစ္စည်းများပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဆီသို့ ဦး တည်သည်.
ကုမ္ပဏီကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို download လုပ်ပါ
ထူးခြားသောလက္ခဏာများ, ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ပုံပြင်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန် Spento Papers India LLP, ကုမ္ပဏီပရိုဖိုင်းကို download လုပ်ပါ. ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်, ရည်မှန်းချက်နှင့်ဆောင်ပုဒ်များကိုနားလည်သဘောပေါက်နားလည်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်မည်.